July 2016 - Page 2 of 36 - iftineducation.com
iftineducation.com – Boqolaal ka mid ah saraakisha ammaanka ee dalka Kenya ayaa bilaabay 5-tii sano ee la soo dhaafay in ay shaqada iska tagaan sababo la xariira dhibaatooyin ay kala kulmaan taliyeyaashooda. Saraakiisha shaqada ka tagtay shantii sano ee la soo dhaafay, waxaa la sheegaya in badankooda ay yihiin muslimiin, waxaana sabab u noqotay in ay shaqada ka tagaan eedeeymo aan…
iftineducation.com – Waxaa Qoray : Maxamuud Cabdi Saciid Fantastic on July 30, 2016. Malaha Jose Mourinho ayaa ku qasbanaan doono inuu kursi ag dhigto dhiigiisa cusub ee Zlatan si uu u fahansiiyo waxyaabaha qaar ee aan ka shaqaynayn horyaalka England. Kibirloowga reer Sweden ayaa markii ugu horaysay ka xamaalan doona horyaalka xamaaliga loo so doonto ee PL, laakiin wuxuu u baahnaan…
iftineducation.com – Madaxwaynaha Turkiga ayaa sheegay in uu doonayo in albaabada loo xiro goobaha wax lagu baro millatariga dalka ayna si toos ah u hoos yimaadaan isaga sirdoonka iyo millatariga. Rajab Dayib Erdogan ayaa sheegay in qorshahan la horgaynay doono baarlamaanka. Talaabadan ayaa noqonaysa middii ugu dambaysay ee ka dhan ah inqilaabkii dhicisoobay ee 15 July. Qorshan ayaa lagu sidoo kale…
iftineducation.com – Ururka Al-shabaab ayaa weerar ka gaystay magaalada Muqdisho iyaga oo ku dilay ugu yaraan lix ruux kuwo kalana ku dhaawacay. Bartilmaameedka ayaa ahaa laanta dambi baarista, waxaana sidoo kale halkaas laga maqlay rasaas la is waydaarsanayo. Dad goob joogeyaal ah ayaa sheegay in ay arkeen ugu yaraan lix ruux oo Mayd ah iyo shan kale oo dhaawac ah. Wararkii…
iftineducation.com – Fadlana ha ikhrin hadii aad kacsi dhawdahay galmada cajaraha ama kilkilaha ama laba naas dhexdooda waa la oggol yahay nimanka qaarkooda waxay ka dalbaan xaasaskooda, siiba marka ay leedahay gabadha naaso waaweyn ama garbo waaweyn ama cajaro waaweyn, ninka xaaskiisa waa u banaan tahay inuu ka galiyo labada cajar dhexdooda ama labada kilkil ama labada naasood wax dhib ah…
iftineducation.com – Raaxo badanaa ! Pique iyo Shakira Oo isku kor shumiyay Xayawaanka loo yaqaano Hoonbaro Wali waxaa fasax kooxohoda ugu maqan qaar ka mid ah ciyaaryahanada ugu laacibka san aduunka , waxaana ka mid ah dafac raaxada u go’ay ee kooxda Barcelona Gerard Pique kasoo nolosha ku xertay fananada qoob ka ciyaarka badan ee Shakira. Daafac xoogan ee dalka Spain…
iftineducation.com – Weydii naagtaada qaabka ay jeceshahay in aad ugu sameeyso weerarka sariirta iyo goobaha ay ka kacsaneyso , sidoo kale haweeneyduna waa in ay iyana weydiisaa . Haka kicin lamaantaada illaa aad ka weydiiso in uu gaaray gariirka galmada (Yacnii dharagtay) haweeneydana waa in ay weydiisaa iyana . Haka kicin lamaantaada illaa aad ka weydiiso in uu gaaray gariirka galmada…
iftineducation.com – DAAWO Shiirka kacsiga xiliga galmada maxay ku kala duwanyihiin Marka hore Bani’aadamku waxa uu markasta u baahan yahay in uu wax ka barto si uu horunar uga gaadho arimo badan oo khuseeya noloshiisa khaasa ahaaneed . Marka ay tahay xidhiidhka ka dhexeeya lamaanahya ayaa waxa uu u baahan yahay in markasta hore loo mariyo. In uu xidhiidhkaasi ahaado mid…